Naya course » अपराधको जरो लागु औषधलाई पुर्ण निष्तेज गर्ने अभियानमा छौ : बाँके प्रहरी प्रमुख राना अपराधको जरो लागु औषधलाई पुर्ण निष्तेज गर्ने अभियानमा छौ : बाँके प्रहरी प्रमुख राना – Naya course
अपराधको जरो लागु औषधलाई पुर्ण निष्तेज गर्ने अभियानमा छौ : बाँके प्रहरी प्रमुख राना
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राना नेपाल प्रहरी भित्र एक ईमान्दार अफिसरका रुपमा चिनिन्छन् । एस.पी. रानाले प्रहरी नागरीकका हरेक दुख र सुखमा प्रहरी साथी हुने बताउछन् ।
बहु साँस्कृतिक, धार्मिक, भूगोलका मानिस बसोबास गर्ने बाँकेको प्रहरी संगठनको नेतृत्व आफ्नो लागि चूनौती र अवसर दुबै भएको बताए । लागु औषध नियन्त्रण, खुला सिमानका कारण हुने बिभिन्न खाले अपराध, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, तस्कर र कालोवजार नियन्त्रण मुख्य चुनौती भएको उनको बुझाई छ । केहिदिनमा लागु औषध निष्तेज महाअभियान २०७७ बाँके घोषणा गरेर लागु औषध नियन्त्रण अभियान घोषणा गर्न लागेका राना अहिलेसम्म रोल्पा, कालिकोट, बौद्ध वृत, दाङ, अर्घाखाची, रसुवा, उदयपुर, काँस्की लगायतका जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको रुपमा काम गरिसकेका उनि अनुभवी र इमान्दार छबिका अधिकृत हुन् ।
बाँके प्रहरी प्रमुख राना संग ५ महिने कार्यकालका बारेमा नयाँ कोर्सले गरेको कुराकानी :
बाँके प्रहरी प्रमुख भएर झण्डै ५ महिने कार्यकाल बिताउनु भएको छ , कस्तो छ बाँकेको बसाई ?
प्रहरी प्रमुख भएर जुन सुकै जिल्ला वा क्षेत्रमा रहेपनि प्रहरीका कामहरु पुर्ब निर्धारीत नै छन । समाजमा रहेका अपराध र अपराधीलाई नामेट पार्नका लागी र कानुन कार्यन्यनका लागी प्रहरी हर हमेसा सक्रिय भएर लागेको हुन्छ । खास गरि बाँके जिल्ला तराईको उच्च जोखिम जिल्ला मध्येको एक हो । बाँकेमा खुला सिमानाका कारण हुने बिभिन्न खाले अपराध, लागु औषध ओसार पसार, सडक दुर्घटना, केही समुदायमा बाल बिवाह लगायतका अपराध हुने गरेको पाएको छु । बाँके जिल्लामा आई सके पछि अपाराध गरेर अदालतले सजाय तोकेका फरार अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने काम लाई अगाडी बढाएको छु । पछिल्लो पाँच महिनामा कर्तब्य ज्यान, बम बिष्फोट, अपहरण, फिरौतीक मुद्धाका फरार अभियुक्त धर्म सिंह भन्ने राजेश यादव सहित झण्डै ४ सय ४१ जना अपराधीहरु पक्राउ परेका छन । ४ सय मध्ये आधा जति गम्भीर अपराध गरेर फरार रहेकाहरु छन ।
पहिलो अपराध हुन नदिने र अपराध गरि सकेको छ भने कानुन अनुसार सजायको भागिदार हुनु पर्छ भन्ने डर पैदा गर्ने गरी कानुन कार्यान्वयनको अभियानमा छु । सुरुवाती चरणबाटै मैले १७ बुदे प्राथमिकता बनाएर अगाडी बढेको छु ।
१७ बुदे प्राथमिकतामा फरार अपराधी नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण, सडक दुर्घटना न्युनीकरण र खुला सिमानाका कारण हुने अपराध नियन्त्रण प्राथमिकता छन । ५ महिनामा त्यसमा कति उपलब्धी हात लाग्यो ?
बाँके जिल्लाको प्रहरी प्रमुख भई आएपछि अपराध मुक्त बाँके बनाउने अभियानमा छु । फरार अपाराधी नियन्त्रणमा प्रदेशमै बाँके अब्बल छ । बाँके जिल्ला हुँदै भारत तर्फ जाने र भारत बाट आउने लागु औषधको ओसार प्रसारको चेन तोडन हामी लागी परेका छौ । खास गरि नेपाल तर्फ बाट जाने चरेस र अफिम लगायतका समान लागु औषध नियन्त्रणमा बाँके प्रहरीलाई उल्लेख्य सफलता हात लागेको छ । पाँच महिनाको अवधीमा अफिम ३४ किलो सहित ४ जना, ब्राउन सुगर १३८ ग्राम, ९०० मिली ग्राम सहित २४ जना, कोरेक्स ७१० सी सी सहित ९ जना, चरेस ३ किलो ५०० ग्राम सहित १ जना, गाँजा १३ किलो सहित २ जना र ट्यापलेट ३३६ सहित २ जना पक्राउ गरेर आवश्यक कानुनी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौ ।
यस अवधीमा तस्करी नियन्त्रण लगायत बिभिन्न जरीवाना बाट झण्डै ३ करोड जरीवाना असुल गरिएको छ । जसमा तस्कर नियन्त्रण बाट मात्रै १ कारोड ५८ लाख रहेको छ । जुवा नियन्त्रण बाट ३३ लाख लगायत प्राकृतिक श्रोत साधन दोहन नियन्त्रण र ट्राफिक कारवाही तथा जरिवाना वाट उल्लेख्य जरीवाना असुल भएको छ ।
दुर्घटना न्युनिकरणका लागि स्थानीय सरकारसंगको साझेदारमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकासंगको साझेदारीमा कोहलपुर चौराहामा ४ ओटा, खजुरा गाउँपालिकासंगको साझेदरीमा खजुरा क्षेत्रमा ९ ओटा सिसी क्यामरा जडान भई सकेका छन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकासंगको साझेदरीमा महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रको शमसेरगंज, अगैया र कुशुम, डुडुवा, भगवानपुरमा सि.सी. क्यामरा जडान गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
मुख्य रुपमा राजमार्ग र चौराहमा जडान गरिएको सिसि क्यामराले अपराधी पक्राउ गर्न र सडक दुर्घटना न्युनीकरणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । सिसी क्याममारको सहायताले पछिल्लो समय हराएको लाखौ रुपैया फेला परेर सम्वन्धीत ब्यक्तिलाई बुझाउन सफल भएका छौ । खुला सिमानका कारण हुने अपराध रोक्न भारतीय पक्ष संग आवश्यक समन्वय गरी यस अघि अपराधमा सम्लग्न धेरै भन्दा धेरैलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भई रहेको छ । आगामी दिनमा छिटै लागु औषध नियन्त्रलका लागी महा अभियान २०७७ सञ्चालन गरि अपराधको मुल जरो उखेल्ने अभियानमा छौ ।
लागु औषध निष्तेज महाअभियान २०७७ बारे केही बताई दिनुहोस् न ?
अपराध नियन्त्रणको लागि प्रहरीको मात्रैको भूमिका नभएर हरेक नागरिकको दायित्व भएको भन्दै सबै मिलेर समृद्ध समाज र शान्ति सुरक्षा कामय गर्नको सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । बाँके जिल्लामा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको र अपराधको जरो लागु औषध नियन्त्रणको अभियानमा हामी छौ । यसमा सबैको साथ आवश्यक छ ।
जिल्लाका ८१ ओटा वडामा वडा स्तरीय समिती निर्माण गरेर महाअभियान सञ्चालन गर्दै छौ । समितीले लागु औषधको प्रयोगकर्ताको पहिचान तथा नाम संकलन, लागु औषध बिरुद्ध सचेतना जगाउने काम गर्ने छ । सो समितीले लागु औषधको कारोवारी पहिचान र नियन्त्रणका लागी प्रहरीलाई नियन्त्रण लिन सघाउने छ । आवश्यक परे समितीले त्यस्तालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी लाई बुझाउने छन ।
खासगरी लागु औषधकै कारण समाजमा साना देखी ठुला ७० प्रतिसत अपराधका घटना घट्ने गरेका पाएका छौ । महाअभियान अन्र्तगत नेपालगंज उप–महानगरपालिका भित्र एक सुधार केन्द्र सञ्चालनको तयारीमा छौ । कोरोना आईसुलेसन सञ्चालन गरिएको र हाल खाली रहेको औद्योगीक बिकास निगमको भवनलाई सुधार गृहका रुपमा सञ्चालन गर्ने सोच छ । एकै पटक सयौं लागु औषध प्रयोग कर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर काउन्सीलीङ गरेर असल नगारीक बनाउने र समाजको हितमा प्रयोग गर्ने सोच छ । महाअभियान बाँके जिल्लालाई लागु औषध मुक्त बनाउन कोसेढुंगा साबित हुने छ ।
अन्यतमा केही भन्नु छ ?
झण्डै ५ महिनाको बाँके बसाईका क्रममा असातीत सफलताहरु प्राप्त भएका छन । स्थानीय सरकार, नागरीक र बाँके जिल्लाका सम्पुर्ण सञ्चारकर्मीहरुको माया र सहयोग पाएको छु । पछिल्लो समय भगवान प्रहरी चौकी निर्माणका लागी जग्गा प्राप्त गर्न सफल भएका छौ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके परीसरमा अमर प्रहरी स्मारक बनाउन सुरु गरिएको छ । नागरीक लाई प्रहरी मेरो साथी हो भन्ने भावनाको बिकास बढदै गएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो सहयोगको अपेक्षा छ । खासगरी बाँके जिल्ला बाट सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि पनि र प्रहरी जिवन बाट अवकास भई सके पछि पनि नेपाली समाजको क्यान्सर भन्दा घातक र अपराधको जरो लागु औषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्ने सोचाई बनाएको छु । आदरणीय बाँके वासी नागरिकहरुमा मेरो विनम्र अनुरोध छ की तपाईको घर, टोल, समाज र कुनै पनि स्थानमा कानुन विपरीत सामाजिक र जघन्य अपराध हुँदैछन् वा भईसकेको छ भनी तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुहोला र त्यसको परिमाण पनि हेर्ने र देख्न पाउनुहुनेछ । तपाईहरुको कुनै गुनासो भएमा सिधै कार्यालय प्रमुख मलाई फोन (मो नं. ९८५८०५५५५५), म्यासेज, प्रत्यक्ष भेट, गुनासो र समस्या राख्न सक्नुहुनेछ ।